/ Products / Ny hafa / Mibolerone vovoka (3704-9-4)
SKU: 3704-9-4. Sokajy: Ny hafa
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra avy amin'ny gram mankany amin'ny lamina mavesatry ny vovonan'ny Mibolerone (3704-9-4), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Mibolerone poids ireo karazana fototra
Ny anarana ara-tsimia: dimethylnortestosterone, Mibolerone poids
Anaram-baovao hafa: Mijery ny rano, Matenon, Mibolerone vovoka, Tsindrio ny vovo-dite, CDB-904, 3704-9-4
Fampiasana vovoka Mibolerone
Ny tanjon'ity steroid ity dia ny manakorontana ny fihodinan'ny alika vavy iray mba hisorohana ny fitondrana vohoka. Tahaka ny karazana hormones maro karazana, ary anisan'izany ny kilasin'ny veterinera, fotoana fohy taorian'ny fanombohana azy dia hitan'ny atleta sy ny mpandoko bozaka fampiasana.
Ny fitsangatsanganana Drops dia iray amin'ireo steroids anabolika tena mahery indrindra teo aloha. Izy io koa dia iray amin'ireo kanseran'ny kanseran'ny aretina indrindra. Tsy steroid izy io matetika ampiasain'ireo mpandidy zavakanto na atleta vaovao. Ho hitanao fa voafetra ihany ny fampiasana azy amin'ny fifaninanana alohan'ny ady na ny fifaninanana. Ny mpanao bakteria sasany dia hampiasa azy io alohan'ny fifaninanana mba hanampiana amin'ny herinandro faran'ny herinandro na mandritra ny vanim-potoana ho an'ny fanosehana fanampiny, saingy tsy steroida be dia be izany. Ho takatsika ity tsy fahampian'ny antso an-tariby ho an'ny mpanao biriky maro ity raha mbola mitohy isika.
Inona no atao hoe vovoka Mibolerone
Ny ankamaroan'ny atleta dia mampiasa 5mgs momba ny 30min talohan'ny fampiofanana na ny fifaninanana. Tsy tena "mifangaro" amin'ny zavatra hafa afa-tsy ny cardarine. Matetika izy io no ampiasaina alohan'ny fanatrehana fampiofanana manan-danja na fifaninanana. Maro amin'ireo atleta efa mampiasa fitsaboana goavam-be amin'ny endriny maro no manampy trondro fanamarinana ho toy ny fampitomboana ny fisehoan-javatra.
Ny fitiliana dia atao am-bava ny menaka ary tsy maintsy entina isan'andro. Ny dôsina dia latsaka ao anaty 200-300mcg isanandro, saingy mety mitombo amin'ny 500mcg isan'andro amin'ny tranga sasany. Dosis dia alaina alohan'ny fampiofanana, eo ho eo amin'ny 30-40 minitra alohan'ny fampiofanana, ady na hetsika. Tsy misy fanafody fitsaboana satria ity steroid ity dia mbola tsy nampiasaina ara-pahasalamana ho an'ny tanjona olombelona.
Ny fomba fiasan'ny Mibolerone
Ny fandinihana ny fitsaboana dia ny fiomanana mivantana ny vovobonin'ny Mibolerone steroida (CAS 3704-9-4), izay ampiasain'ny mpandidy biriky, hery mpamonjy, atleta matanjaka sy mpiady, rehetra mba hampitombo ny herisetra sy ny fampisehoana amin'ny andron'ny fifaninanana. Ny fitiliana ny fitsaboana dia mahomby rehefa ampiasaina minitra 30 mialoha ny fifaninanana. Ny mpampiasa dia hiaina herisetra mihamitombo, mifantoka amin'ny fifaninanana ary fifaninanana. Na dia tsy misy fitsaboana mivantana aza ity steroid ity dia mampiseho fihetsika iray hita eo amin'ny CNS (System Central Nervous) amin'ny alalan'ny karazana androgen overload. Izany no hany antony nampiasan'ny atleta ity fanafody ity, satria tsy misy dikany amin'ny zava-mahadomelina izany.
Tsy misy porofo marina anecdotal na raha tsy izany dia atahoran'ny atleta ny fitsapana amin'ny "cycle" tahaka ny fanao amin'ny steroids hafa. Toa ity steroid ity dia nanao fanambarana mafonja ho toy ny fialan-tsasatra mialoha ny hetsika ho fampitomboana ny herisetra sy ny fifaninanana amin'ny fifaninanana. Na izany aza, dia tsy misy fandrosoana goavana eo amin'ny vatana amin'ny aretin-kozatra azo atao noho io zava-mahadomelina io satria azo ampiasaina amin'ny seza 2 fohy herinandro fohy, ao amin'ny dosage kely 5mg. Mbola misy fotoana bebe kokoa amin'izany, na marary bebe kokoa, ary olana ara-pahasalamana.
Fanamarihana manan-danja: Ny fanarenana voajanahary dia tsy misy fahavoazana natao tamin'ny Hypothalamic-Pituitary-Testicular-Axis ary tsy teo aloha ny fepetra ambany ambany.
· Hepatotoxicity: Tahaka ny steroid rehetra anabolic C17-aa Manamarina ny aty ny menaka. Ny taham-pahalalana sy ny maha-zava-dehibe ny toetry ny toaka avy amin'ny iray C17-aa steroid amin'ny manaraka dia miovaova be; Ny sasany dia mamoafady fa malefaka toy izany, saingy tsy mora izany. Ny fitsangatsanganana dia afaka iray amin'ireo fiantraikany mahery vaika indrindra amin'ny atomôma amin'ny atiny rehetra amin'ny steroids C17-aa. Hihanitombo ny soatoavin'ny taovam-pananahana ary henjana ny atin'ny aty.
Raha manana aretina ianao, dia tsy tokony hampiasainao io steroid io. Ny fampiasana dia tsy maintsy atao ihany koa amin'ny 2-3 herinandro fara fahakeliny ary tsy tokony ampiasaina miaraka amin'ny steroid rehetra hafa C17-aa. Tokony hisorohana ny fanafody amin'ny alàlan'ny fitsaboana ny ankamaroan'ny aretina, ary miteraka vinaingitra fanampiny izany. Zava-dehibe ihany koa fa tsy avelan'ny mpampiasa alikaola mandritra ny fampiasana ary ampidiro amin'ny mpanadio ny atiny. Ny tsy fanaovana ireo zavatra ireo dia mety miteraka olana amin'ny aty, ary amin'ny mpampiasa sasany ny adin-tsaina dia mety ho lehibe na dia manao ny zavatra rehetra aza.
Mibolerone vovoka Marketing
Manana fiantraikany mahatsiravina ny vovoka Mibolerone
Ny fiantraikan'ny zava-mahadomelina dia maro. Io no iray amin'ireo steroids anabolika mampidi-doza indrindra hatramin'izay. Satria ny voka-dratsin'ny Check Drops dia matanjaka toy izany dia tsy steroid ny olona tokony hampiasa tena. Misy safidy maromaro kokoa. Ny fitomboan'ny herisetra lazaina alohan'ny ady dia mety haka fanahy, saingy mety hiteraka valisoa miaraka amin'ity steroid ity ny loza. Tsy midika izany fa ny olona dia ho faty, ary mety ho vokatry ny fiheverana ny fakana dipoavatra mba hisorohana amin'ny dingana (tsy azo sakanana tanteraka).
· Estrogenic: Ny vokatry ny fatiantoka amin'ny etrôgônika na ny fitsaboana dia tena azo tanterahina satria ity no fanandramana azo avy amin'ny steroïde ary mahavariana be. Ny voka-dratsin'ny Check Check dia mety ahitana ny gnecomastia, ny fitehirizana rano ary ny tosidra ambony amin'ny angona maintin'ny rano. Na izany aza, satria ny fampiasana dia tsy fahita firy loatra ary ny doses ampiasaina dia ambany (mila kely vidy Mibolerone hampitombo ny herisetra) ny vokatra estrogenic dia tsy hita matetika.
Ny fampiasana ny Aromatase Inhibitors (AI) tahaka ny Anastrozole (Arimidex) dia afaka miaro amin'ny voka-dratsin'ny estrogenic effects of Check Drops. Izany dia hanome fiarovana amin'ny estrogen sy ny progesterone mifandray. Na izany aza, ny hetsika etrogenika dia matanjaka toy izany dia mety ho an'ny olana mbola misy ao amin'ny lehilahy sasany.
Androgenic: Ny androgenic effects of Check Drops dia mety ho ny akne, ny volo eo amin'ny vatana ary ny fahaverezan'ny volo amin'ny lehilahy voatokana ho lahy ny baldness. Ny vokatry ny androgenic effects of Check Drops dia mety ahitana ny fanasitranana virilisina amin'ny vehivavy; Raha ny tena izy, dia azo antoka ny virilization amin'ny ambaratonga sasany.
• Ny voan'ny kardia: Ny vokatry ny fikarohana dia mety hampiditra ireo karazam-borona mahery vaika. Ity steroid ity dia mety ho mafy dia mafy amin'ny koleraolinina sy ny tsindrimandry. Mety hisy fiantraikany goavana eo amin'ny kolesterola HDL (kolesterola tsara) sy ny koloroola LDL (kolesterola ratsy). Raha misy olona manana toe-tsaina hodi-kaza, na taloha na ankehitriny, dia tsy tokony hampiasa ity steroid ity izy.
Ireo izay mampiasa ity steroid ity dia te-hahazo antoka fa miaina fiainam-pianakaviana mahafinaritra izy ireo. Ny fahasalamana ara-pahasalamana izay manankarena amin'ny arina omega fetsy ary ambany ny sira ary ny saka tsotra dia tena zava-dehibe. Tsy maintsy ilaina ihany koa ny fikarakarana kardia fambolena, toy izany koa raha tsy tafiditra ao anatin'io fomba fanao io ity steroid ity dia tsy ho anao izany. Ny mpampiasa koa dia tokony hampitomboina amin'ny antioxidant cholesterol ary manara-maso akaiky ny fahasalaman'ny foza.
· Testosterone: Ny fijerena ny Drops dia hanakana ny famokarana testosterone voajanahary ary hanao izany faingana. Ny fampiasana testosteron exogenous dia tsy maintsy ilaina raha avahana ny fepetra testosterone ambany. Na dia ampiasaina mandritra ny fotoana fohy aza ny fampiasana ity steroid ity, ny faharetan'ny fampiasana dia tsy hanalavitra ny fanafoanana testosterone voajanahary vokatry ny steroid ary tsy ho an'ny génétique ny olona.
Raha vantany vao tapitra ny fampiasana ity steroid ity ary ny steroids rehetra rehetra dia nanala ny rafitra, hanomboka indray ny famokarana testosterone. Na izany aza, ny toro-hevitra ara-tsosialy (Post Cycle Therapy) (PCT) dia atolotra. Hanatsara ny fahasitranana izany; Tsy hiantoka izany izy io ary tsy hamita azy, fa hanatsara ny fepetra fanarenana tsara. Tahaka ny steroïde rehetra, dia mety tsy ho sitrana foana ny fitsaboana rehetra, ary tokony hodinihina alohan'ny fampiasana azy.
Ahoana no hividianana vovoka Mibolerone avy ao AASraw